लमजुङमा बन्ला त स्मार्ट फिल्म सिटी ? – Shuva News
लमजुङमा बन्ला त स्मार्ट फिल्म सिटी ?
Shuvanews १९ असार २०७६, बिहीबार July 4, 2019 150 Views
लमजुङमा स्मार्ट फिल्म सिटी निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ । भएको छ । लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेँसीसहर नगरपालिकामा निर्माणका लागि पारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नगरपालिकाको करिब पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट फिल्म सिटी निर्माणका लागि पाँच अर्ब ९० करोड रुपियाँ लगानी हुने बताइएको छ ।
वल्र्ड एरिया होल्डिङ एसआरएल इटाली र स्काई इन्टरटेनमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालि नेपालको संयुक्त लगानीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्न लागिएको हो ।
निर्माणका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र सचिव महेन्द्रमान गुरुङको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले निर्धारित समयभित्र फिल्म सिटी निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाली चलचित्रका लागि फिल्म सिटी निर्माणको शुभारम्भ महत्वपूर्ण रहेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
उहाँले चलचित्र छायाङ्कनका लागि विश्वका चलचित्रकर्मी आकर्षित गर्न सरकारले ‘डेस्टिनेसन नेपाल’ घोषणा गरेको स्मरण गर्दै बिनाअवरोध काम सम्पन्न गर्न स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल, सरकारका सबै तहको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
इटाली लगानीकर्ता वल्र्ड एरिया होल्डिङ एसआरएलका अध्यक्ष फ्रान्सिस्को सिग्नेरेलो र नेपाली लगानीकर्ता स्काई इन्टरटेनमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका आकाश अधिकारीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
निर्माता तथा निर्देशक अधिकारीले फिल्म सिटीमा पाँच अर्ब ९० करोड रुपियाँ लगानी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्मार्ट फिल्म सिटीमा अत्याधुनिक स्टुडियो, आउटडोर र इन्डोर सुटिङ स्टुडियो, विश्वका प्रख्यात सहरका साथै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका मिनिएचर निर्माण गरिनेछ ।
कार्यक्रममा बेँसीसहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी अधिकारी, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई लगायतको उपस्थिति थियो । फिल्म सिटी बेँसीसहर वडा नम्बर ३, ४, ५ र ९ को करिब पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने जनाइएको छ ।